जुवातास खेल्ने ३९ जना चार लाखसहित पक्राउ - नेपालबहस
गृहपृष्ठ सुरक्षा/अपराध नेपाल प्रहरी जुवातास खेल्ने ३९ जना चार लाखसहित पक्राउ
२५ असोज, राँझा । बाँकेमा दशैँ अवधिमा जुवातास खेल्ने ३९ जनालाई रु. चार लाखसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दशैँ अवधिभर बाँकेमा जुवाका पाँचवटा खालमा प्रहरीले छापामारी ३९ जनालाई रु तीन लाख ९७ हजार १५३ सहित पक्राउ गरिएको बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर वलीले बताए ।
उनका अनुसार, पछिल्लोपटक नेपालगञ्जमा बिहीवार राति १७ जना जुवाडे पक्राउ परेका हुन् । गणेशपुरबाट रु एक लाख ८३ हजारसहित उनीहरू पक्राउ परेका थिए । सबभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाको विभिन्न वडाबाट २२ जना जुवाडे पक्राउ परेका हुन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमबहादुर शाहीका अनुसार, जुवा खेलिरहेको सूचनाका आधारमा रेडक्रस रोडमा रहेको एक इन्स्टिच्यूटबाट रु ९८ हजारसहित कोहलपुर नगरपालिका–११ न्यूरोड बस्ने उमेश शाही, सोही ठाउँका केशव क्षेत्री र वडा नं. १३ बस्ने नरबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले गत शनिबार मात्र कोहलपुरमा जुवा खेल्दै गरेका १९ जना व्यक्तिलाई विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको थियो । कोहलपुर नगरपालिका–५ शान्तिनगरबाट ११ जनालाई रु २६ हजार र शनिबार राति नै बैजानाथ गाँउपालिका–४ तिलकपुरबाट आठ जनालाई रु ९० हजार १५३ सहित नियन्त्रणमा लिएको हो ।
कोहलपुर र नेपालगञ्जमा जुवाका खालमा प्रहरीले धमाधम छापा हानेपछि नियमित जुवा खेल्नेहरू ग्रामीण क्षेत्रतिर लागेका छन् ।
अघिल्लो लेखनेपाली कांग्रेसले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरेको छ
अर्को लेखराष्ट्रपति सीको सुरक्षाका लागि ५० चिनियाँ सुरक्षाकर्मी काठमाडौंमा
जुवातासको खालबाट फेदिखोलाका १३ जना पक्राउ
लेकसाईडबाट जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ८ जना पक्राउ
नगद १ लाख २० हजारसहित ६ जना पक्राउ
नागार्जुन र कास्कीबाट १४ जुवाडे पक्राउ
नगद ३ लाखसहित २२ जुवाडे पक्राउ
नगद १ लाखसहित ७ जुवाडे पक्राउ